अचम्मको देश केन्या अफ्रिकी महादेशमा को पूर्वी भाग मा छ। यसको क्षेत्र लगभग आधा धरती गरेको भूमध्यरेखा विभाजित छ। पूर्व गर्न भारतीय महासागर केन्या द्वारा धोए छ। उहाँले बिस्तारै सेतो बालुवा सिर्जना कि प्रकृति, देश को समुद्र तट यसको छालहरू वहन। towering हिमालहरूको अफ्रिकी राज्य पश्चिमी भाग मा र ग्रेट स्थित।
उत्तरी मा केन्या र इथोपिया सीमाना। सोमालिया संग - पूर्व मा। तान्जानिया संग - दक्षिण-पश्चिम मा। दक्षिण सुडान संग - युगान्डा र उत्तर-पश्चिम संग - पश्चिम मा।
आराम गर्न एक अद्भुत ठाउँ
तपाईं अझै आफ्नो छुट्टी जहाँ खर्च गर्न निर्णय गरेका छौं भने, केन्या बारेमा जानकारी जाँच गर्न निश्चित हुन। प्राचीन समयमा अरब व्यापारीहरु चाहनुभएको रूपमा यो देश एक पटक नाम थियो "काली मान्छे को भूमि।" आज, यो केन्या पर्यटन को एक किसिम प्रदान गर्दछ जो पर्यटकहरूको लागि रोचक छ। समीक्षा एक सफारी गर्न आकर्षक यात्रा तिनीहरूलाई को बहुमत भन्छन्। यो अफ्रिकी देश चालीस भन्दा बढी राष्ट्रिय पार्क र राष्ट्रिय रिजर्व हो भन्नुभयो छ।
तिनीहरूले पनि केन्या लागि उल्लेखनीय छन्। समीक्षा यी प्राकृतिक क्षेत्रको क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक अवस्था गर्न करीब निकटता आनन्द र जीवन र जंगली जनावर को व्यवहार पालन गर्न भन्छन्। Masai मारेको - - ती कुनामा मध्ये पर्यटकहरूले अफ्रिकी महादेशमा को तथाकथित ठूलो पांच जनावर दुवै हेर्न सक्छन्। यो rhinos र हात्ती, सिंह, भैंसि र तेंदुआ समावेश छ। प्रकृति रिजर्व मा जनावर मा शिकार छैन। यो व्यवस्था गरेर निषेधित छ। तर, अचम्मको र शक्तिशाली जनावर हेर्न रूपमा समय परमिट धेरै हुन सक्छ।
केन्यामा विदा तथा यसको समुद्र तट रिसोर्ट्स लागि प्रसिद्ध छ। देश मा उनि चार नम्बर। यो Malindi र ममबासा, लामु र Vagamu। केन्या समुद्र मा एक भव्य छुट्टी प्रस्तुत। को समुद्र तटीय प्रत्येक आगन्तुक greets कि सान्त्वना बुझ्न पर्यटकहरु को समीक्षा। यो भव्य होटल, सबै आवश्यक सुविधाहरु र मनोरञ्जन छ जो।
यात्री केन्यामा रहन अरू के आकर्षित गर्न सक्छन्? समीक्षा - डाइभिङ - स्थानीय समुद्री आरक्षित Vagamu स्थित कोरल reefs मा डाइभिङ indifferent जो कोहीले छोड्न सुझाव। यो भारतीय महासागर मा उपस्थित विदेशी Fauna देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ एउटा अचम्मको ठाउँ हो।
पनि देशको संरक्षण क्षेत्रमा एक यात्रा संग केन्या पर्यटन प्रस्ताव राखे। यी Vagamu, Amboseli, Masai मारेको, र धेरै अन्य रूपमा राष्ट्रिय पार्क हो।
केन्या indifferent र प्राचीन प्रेमीहरूलाई छोड्न छैन। देश जहाँ त्यहाँ प्रागैतिहासिक मानव बस्तियों को भग्नावशेष धेरै ठाउँमा छन्।
नियम, केन्यामा बाँकी भारतीय महासागर को न्यानो पानी मा स्नान समावेश, यो अफ्रिकी राज्य को क्षेत्र मा सेतो बालुवा समुद्र तट मा सूर्य, साथै यात्रा को उज्ज्वल रेज अन्तर्गत गतिविधिहरु। यसरी आफ्नो छुट्टी खर्च गर्न चाहनेहरूको ती, तपाईं देशमा चार रिसोर्ट्स एक जानुहोस् गर्नुपर्छ। जो एक चयन गर्न?
को प्रशंसक बीच बिदा र साना यात्राको न्यानो भारतीय महासागर को तट मा जानु पर्छ। र तपाईं केन्या जस्तै देश चिन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने? यात्री समीक्षा रोक्न ठाउँ प्रदान गर्न आवश्यक छ, जो अलग मार्ग, विकास गर्न सुझाव दिन्छौं। तर, व्यापार, आराम र यात्रा गर्ने अधिकार दृष्टिकोण संग संयुक्त गर्न सकिन्छ। तपाईं तटीय रिसोर्ट्स नजिक निकटता छन् स्थानीय विमानस्थलको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो सम्भव हुनेछ। संग घरेलू उडान गर्ने विदेशी देश को विभिन्न भागहरु भ्रमण गर्न छोटो समयको लागि हुन सक्छ।
यो रिसोर्ट केन्या को उचित गर्व छ। समीक्षा उहाँले देश मा सबै भन्दा राम्रो छ भन्छन्। यसको क्षेत्र मा सुन्दर युरोपेली, अरब र अफ्रिकी परम्परा intertwined। पर्यटकहरु आफ्नो मध्ययुगीन घुमावदार सडकमा संग eponymous पुरानो शहर भ्रमण गर्न खुसी, Makupa बजार, को गढ फोर्ट येशूले बजारहरु। म यसलाई र रिसोर्ट को भव्य बलौटे समुद्री तट आनन्द।
ममबासा को दक्षिण सहज होटल हो। तिनीहरूले Diani, Tiwi र शेले को समुद्र तट बढ्छ। त्यहाँ होटल र शहर को उत्तर छन्। तिनीहरूले साथै Mnengo मा को रूप मा, खाइयों र Bamburi, Nyali र Kikambala मा पर्यटकहरु आमन्त्रण। सबै होटल यात्री अफ्रिकी र युरोपेली सेवा विदेशी मिश्रण प्रतीक्षा।
सबैभन्दा लक्जरी होटल Diani मा समुद्र तट मा अवस्थित छ। तिनीहरूले पूर्व अफ्रीका को तट मा सबै भन्दा राम्रो हुन्। तर रिसोर्ट को उत्तरी भाग मा त्यहाँ किफायती मूल्यहरु बढी छन्, तर एकै समयमा एकदम सहज होटल।
जो Bamburi भ्रमण ती, तपाईं बिल्कुल को Haller पार्क भ्रमण गर्नु पर्छ। यो जहाँ यात्री कि केन्यामा बढ्न बिरुवाहरु को सबै प्रकार देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अचम्मको ठाउँ हो। त्यहाँ पार्क मंडप मा पुतलीहरु छन्। पर्यटक चासो र hippos र जिराफ इलाका मार्फत strolling कारण।
को सहारा र एउटा सानो-Trayl mikropark Bamburi मा स्थित। यसको आगंतुकों धेरै शाकाहारी भएको crocodiles, बिरालो को प्रतिनिधिहरु र चरा को दुर्लभ प्रजाति हेर्न सक्नुहुन्छ।
ममबासा निर्माण नाइटक्लब, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो, क्याफे र बारहरू को तट साथ मनोरञ्जन प्रेमीहरूलाई लागि। यो रिसोर्ट र डाइभिङ मा लागि प्रतीक्षा को पानी संसारको सौन्दर्य र विविधता। ममबासा मा आराम गर्न नजिकैको सबैभन्दा ठूलो सर्प खेत, प्रकृति रिजर्व र Kisite Mpunguti, साथै राष्ट्रिय पार्क Taita-Hillomorsky र Shimba हिल्स भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ निर्णय गर्नेहरूलाई।
यो रिसोर्ट ममबासा, केन्या को उत्तर मा स्थित छ। यो एउटा अचम्मको ठाउँ र एक समुद्री आरक्षित छ। यो रिसोर्ट पनि केन्या आकर्षित भएका ती यात्री सल्लाह गर्न सक्छन्। Malindi, भ्रमण पर्यटकहरु को समीक्षा यसलाई डाइभिङ लागि ठूलो ठाउँ छ भन्छन्। स्थानीय सेतो बलौटे समुद्री तट धोइदिनुभएर भारतीय महासागर को कोरल reefs, तपाईं समुद्री जनावर को एक किसिम आनन्द उठाउन सक्छौं। साथै, टुर पानी सफारी गर्न पार्टीहरूलाई बन्न एक अद्भुत मौका प्रदान।
यस रिसोर्टमा को केन्द्र Malindi को शहर छ। यो दुई dissimilar अंश हुन्छन्। तिनीहरूलाई को एक स्थानीय रेस्टुरेन्ट र सस्तो होटल घरहरुमा जो मध्ययुगीन अरब शहर छ। Malindi को दोस्रो भाग - इटालियन। यो लक्जरी होटल मा रहन महंगी बुटीक, नाइटक्लब र क्यासिनो भ्रमण गर्न यात्री भेटी, आधुनिक पर्यटक केन्द्र हो।
Malindi मा, अतिथि वास्को दा गामा द्वारा सेट गरिएको छ जो एक पार, को आकार मा देशको extant पुरानो अफ्रीका मा पोर्चुगिज स्मारक अन्वेषण गर्न सक्छ। प्राचीन प्रेम Gedi को नजिकै प्राचीन शहर को भग्नावशेष गर्न पर्यटन प्रदान गर्दछ।
Malindi मा पर्यटन Gourmets प्राप्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। तिनीहरूलाई लागि, यो रिसोर्ट आराम गर्न सही ठाउँमा हुनेछ। स्थानीय रेस्टुरेन्ट मा विदेशी व्यञ्जन प्रेमीहरूलाई समुद्री को एक शानदार चयन राष्ट्रिय seasonings र सस संग तयार लागि प्रतीक्षामा छ।
केन्यामा आफ्नो छुट्टी तपाईं कहाँ अरू खर्च गर्न सक्छन्? यात्री समीक्षा प्रशंसा गरिन्छ र Vagamu रिसोर्ट, राष्ट्रिय समुद्री पार्क को क्षेत्र मा स्थित। यो स्थान गोपनीयता र सौहार्द प्रेम गर्नेहरूका लागि सिद्ध छ। यहाँ समुद्र तट कोरल reefs धेरै छ चरा र जनावरहरू, विभिन्न प्रजाति र तटीय पानी घर हो जो एक किसिमको जडीबुटीको प्राकृतिक जंगल, ढाकिएको छन्। इच्छा सबैलाई यसको पानी संसारको अचम्मको सौन्दर्य पराउँछु गर्न ग्लास-तल डुङ्गामा एक सवारी लागि जाने मौका Resort गर्न। यहाँ आयोजित र गोता सफारी।
, को रिसोर्ट Vagamu स्थित केन्यामा होटल, टावर ट्रपिकल landscaped उद्यान घेरिएको। तिनीहरूले पर्यटकहरु आरामदायक र विशाल आवास, उत्कृष्ट सेवा, मनोरञ्जन र उत्कृष्ट भोजन को एक किसिम प्रस्ताव।
Shimba हिल्स - Vagamu टाढा छैन केन्या राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। यहाँ यात्री को दुर्लभ हरिण Roen देख्न सक्छौं। Vagamu सफारी लागि प्रतीक्षा मा जानुहोस्। तिनीहरूले देश को सबै भन्दा ठूलो आरक्षित मा संगठित - Tsavo।
यो केन्याको रिसोर्टमा सबैभन्दा असामान्य छ। यो न्यानो भारतीय महासागर को तट मा, देश को पूर्व मा स्थित छ। नाम लामा मात्र mangroves घेरिएको एक पोर्ट छ। यो पनि शहर, को द्वीपसमूह र द्वीप छ। ती सबै एउटा सानो नहर द्वारा महाद्वीप अलग छन्। इक्वेटोरियल अफ्रीका लामु इलाका मा कारण यसको गर्न जो पुरानो शहर र व्यस्त पोर्ट, को छ mangroves 15 औं शताब्दीमा देखि ज्ञात गरिएको छ।
पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय टापुमा पर्यटन आनन्द। केन्यामा हामी यात्री गए लामु यसको अतिथि जीवित अवस्था एक किसिम प्रदान गर्दछ भनेर संकेत गर्छ। यो अफ्रिकी सहर को क्षेत्र मा एक डिजाइनर निजी विला र होटल, सस्तो होटल र आरामदायक अतिथि घरहरू छ।
भव्य समुद्र तट छुट्टी र स्पा लामु प्रदान गर्दछ (केन्या)। समीक्षा कि sunbathe भन्न र विदेशी खजुरका overlooks जो पहेंलो वा सेतो बलौटे समुद्र तट, छनौट, देश को यो भाग मा पौडी खेल्न धेरै तनावमुक्त वातावरणमा हुन सक्छ।
केन्यामा यो रिसोर्ट छुट्टी मा उल्लेखनीय अरू के छ? यात्री समीक्षा डाइभिङ उत्साही भएको समुद्री राष्ट्रिय निकुञ्ज Kiunta रोचक पर्यटन बारेमा भन्छन्। यहाँ सबै मेहमान कोरल संसारको वैभवशाली हेर्न मौका दिइन्छ। लामु र रिजर्व को द्वीप नजिकै Dodoni र boni छन्। आफ्नो क्षेत्रमा कुकुर, dingoes र jackals, सिंह र हात्ती, जिराफ र antelopes को जनसंख्या द्वारा Inhabited मा। यो देश को यो भाग र Tana नदी एउटा सानो आरक्षित मा स्थित छ। बाँदर को एक दुर्लभ प्रजाति - यहाँ, प्रकृति प्रेमीहरूको रातो colobus देख्न सक्छौं।
सबै भन्दा ठूलो पर्यटक केन्द्र
के अन्य शहर केन्या यसको अतिथि निम्तो? समीक्षा र बिदाको समयमा लिएको फोटो, तिनीहरूले यात्री गर्न ठूलो चासो अफ्रिकी राज्य राजधानी हो भनेर भन्न - नैरोबी। यो मुख्य व्यापार र औद्योगिक, केन्या को शैक्षिक र सांस्कृतिक केन्द्र, साथै महाद्वीप को पूर्वी भाग भर यातायात हब हो।
देश मा दोश्रो सबै भन्दा ठूलो शहर र ममबासा को एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य हो। र आफ्नो eponymous रिसोर्ट ती पर्यटकहरु केन्यामा एक समुद्र तट छुट्टी रुचि जो द्वारा भ्रमण गर्नुभएको थियो। धेरै यात्री को समीक्षा भन्न एक कोरल द्वीप, एक अविस्मरणीय अनुभव मा स्थित शहर, मा गतिविधिहरु छ।
त्यहाँ पर्यटकहरू ध्यान आकर्षित जो अन्य ठूलो बस्तियों छन्। यो किसुमु र Nakuru, Nanyuki र Thika र Eldoret।
के केन्या गर्न यात्री आकर्षित? यो देशमा पर्यटन जनावर र बोट संसारको मात्र प्रेमीहरूको आकर्षित गर्छ। आकर्षित विदेशी अफ्रीका र इतिहास र यस क्षेत्रको ठाँउहरु रुचि ती। देश को पाहुनाहरूलाई पक्कै पूर्व ब्रिटिश फोर्ट नैरोबी भ्रमण हुनेछ। यसलाई आफ्नो eponymous राष्ट्रिय निकुञ्ज लागि रोचक छ केन्या को राजधानी, साथै फारमहरु, जिराफ, लेखक करेन Blixen संग्रहालय छ र "Bomas-को-को-केन्या" - एक ठाउँ जहाँ स्थानीय संगीत र नृत्य समूह द्वारा प्रदर्शन।
घडी टावर र संसद को हाउस र पहिलो राष्ट्रपति Jomo Kenyatta को समाधि लागि प्रतीक्षा पर्यटक शहर को केन्द्र मा। अफ्रिकी राज्य राजधानी को निर्देशित भ्रमण निश्चित हिन्दु मन्दिर भव्य दर्जनौँ घरहरुमा जो अंग्रेजी चौथाई, मा ठाउँ लिन र राष्ट्रिय संग्रहालय आगन्तुकहरूलाई परिचय हुनेछ।
रोचक यात्राहरु प्रस्ताव छन् र साना बस्तियों। उदाहरणका लागि, Ngomongo गाउँमा। यो गाउँ, जहाँ तपाईं जीवन र बस एघार स्थानीय कुल संस्कृति को बाटो निरीक्षण गर्न सक्छन्। र एउटा सानो गाउँमा Bombolulu, पर्यटक धेरै स्मारिका पसलहरूमा र पसलहरु पाउनुहुनेछ शिल्प को केन्द्र हो।
यात्री कुनै पनि समस्या बिना केन्यामा सक्रिय र समुद्र तट छुट्टी संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। बलौटे shorelines यसको माइल संग ममबासा गर्न यात्रा गर्नेहरूलाई देखि प्रतिक्रिया, यो रिसोर्ट सजिलै हुन Gedi पुरातन भग्नावशेष नजिकै रहेको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर याद (13-17 सीसी।)। यहाँ, यात्री राजमहलको भग्नावशेष, शहर ढोकाहरू को रहलपहल र मस्जिद को नींव को आँखा खोल्न हुनेछ। यो रोचक कुरा सबै भवनहरु सागर मा mined गरेको गरिएको र निर्माण साइटमा ओसारपसार गर्ने कोरल reefs मा erected छ।
पक्कै पनि प्रश्न उतेजित गर्नु हुनेछ विदेशी अफ्रिकी देश भ्रमण गर्न निर्णय गर्ने एक: "केन्यामा मौसम छ के?"। यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएको जलवायु subequatorial हो भन्नुभयो छ। यस दिन मा थर्मामीटर 27-32 डिग्री को एक चोटी गर्न उठ्नेछ गर्न सक्नुहुन्छ। रात, क्षेत्र आधारमा, यो प्लस 10-18 पर्छ।
देश मा उत्तेजक र driest स्थानहरू लेक रुडोल्फ नजिकै स्थित उत्तर-पूर्वी पठार इलाका र क्षेत्र छ। हावा तापमान कहिलेकाहीं राति झर्ने गर्न प्लस बीस-छ, तीस-आठ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ।
हामी केन्या को केन्द्रीय Highlands विचार भने, त्यहाँ थर्मामीटर मात्र ऊंचाई मा निर्भर गर्नेछ। उदाहरणको लागि, केन्या को राजधानी (समुद्र स्तर माथि 1800 मिटर)। यहाँ जाडो दिउँसो भएको थर्मामीटर तेह्र डिग्री गर्न झर्ने राति, प्लस 25 rises मा। को गर्मी मा, क्रमशः, 21 - 11। उच्च उँचाइमा राति त्यहाँ frosts र माउन्ट केन्या मा वर्षैभरि हिउँ छ।
देश को तटीय क्षेत्रहरु मा जलवायु नम्र छ। को जाडो मा दिन मा हावा तापमान +31 डिग्री पुग्यो, र रात +24। को गर्मी मा, क्रमशः, 28 र 23।
केन्या र दुई वर्षाको मौसम मा छन्। सबैभन्दा ठूलो वर्षा मार्च देखि जुन र अक्टोबर देखि डिसेम्बर यहाँ पर्छ।
जब यस्तो केन्या, पर्यटन रूपमा सबैभन्दा अनुकूल मौसम अवस्था एक देशमा? यात्री समीक्षा यस अफ्रिकी राज्य भ्रमण गर्न उत्तम समय जनवरी देखि मार्च र जुलाई देखि सेप्टेम्बर अवधि छ भन्छन्। जनवरी, फेब्रुअरी र अक्टोबर मा पर्यटन प्राप्त गर्न मनमोहक बीच प्रेमीहरूको। एक केन्याको सफारी मन गर्नेहरूका लागि, यो मार्च गर्न जनवरी देखि अवधिमा देश भ्रमण गर्न उचित छ। यो समय चयन र चरा हेर्न प्रेम गर्नेहरूलाई गर्नुपर्छ।
धेरै पर्यटकहरु यसको सुन्दर र वैविध्यपूर्ण वनस्पति र जीव पराउँछु गर्न, अफ्रिकी देश भ्रमण गर्छन। देश को मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरू चालीस राष्ट्रिय पार्क र प्रकृति रिजर्व राज्य द्वारा सुरक्षित इलाका मानिन्छ छन्। यी ठाउँहरू छन् rhinos द्वारा Inhabited र हात्ती, भैंसि र सिंह, जिराफ तेंदुआ, antelopes र चितुवा।
जुन देखि सेप्टेम्बर, पर्यटकहरूले Masai मारेको देख्न सकिन्छ कि अद्वितीय अमरीकी द्वारा आकर्षित छन्। यहाँ Serengeti को बेसी देखि खाना र पानी को खोज मा antelopes लाखौं पठाए। एक दूरी 1,800 माइल मा जनावर को यो प्रवास संसारको साँचो आश्चर्य भनिन्छ।
छैन केन्या को राजधानी शहर देखि टाढा महान् अफ्रिकी दरार वा महान् दरार घाटी छ। यो स्थान - ग्रह मा सबै भन्दा शानदार को एक। दरार पृथ्वी प्लेट को गति समयमा वर्ष पहिले लाखौं गठन भएको थियो जो एउटा अचम्मको दृष्टि छ। महान् दरार घाटी को क्षेत्र मा बारेमा तीस सक्रिय र अर्ध-सक्रिय ज्वालामुखियों rises। यहाँ स्थित पर्यटकहरु र alkaline पोखरी आकर्षित। तिनीहरूले चार लाख flamingos गर्न एक स्थायी घर हो। सारा ताल मा - यो पनि देश को प्राकृतिक धन छ। तिनीहरूमध्ये भ्रमण पर्यटक गन्तव्य Naivasha छ। यसलाई जो नजिकै चरा र धेरै hippos तीन भन्दा बढी सय चालीस प्रजाति छन् एक पवित्र ताल छ।
रोचक प्राकृतिक केन्यामा आकर्षण झरने Adamson छन्। तिनीहरूले Meru राष्ट्रिय निकुञ्ज गर्न nahodyatsyav। यात्री र पवित्र काया वन Mijikenda मानिसहरूले ध्यान आकर्षित। तिनीहरूले देश को तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छ। पवित्र को स्थिति, यी वन किनभने कुलको Mijikenda मानिसहरूका बाँचिरहेको अधिक तीस गाउँ, को भग्नावशेष को thickets आफ्नो लुकाउने को प्राप्त गरेका छौं।
लोकप्रिय पर्यटक मार्गहरू द्वीप गोही गर्न चलाउनुहोस्। उहाँले किनभने यसको किनारा नजिकै बाँच्ने crocodiles को विशाल संख्या को प्रसिद्ध भए।
केन्या प्रदान गर्दछ र बाँकी को चरम प्रकार। यो रात सफारी र तातो हावा बेलुन सवारी।
अविश्वसनीय विविधता र भिन्नताहरूलाई को भूमि केन्या मानिन्छ। यसको क्षेत्र मा बस्ने मान्छे, 70 भन्दा बढी आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत। तर, तिनीहरूको बीचमा पश्चिमी संस्कृति मतभेद को केन्याको जीवन मा क्रमिक प्रवेश कारण थप र थप धमिलो छन्।
पूर्वी प्रान्त बस्ने स्थानीय मानिसहरूले र तट को सबै भन्दा इस्लाम पालना गर्दछ। देश बाँकी मानिसहरू मसीही मण्डली जानुहोस्। केन्या केही क्षेत्रमा स्थानीय धर्म को गठन थियो। तिनीहरूले ख्रीष्टियन, इस्लाम र राष्ट्रिय विश्वास को एक मिश्रण प्रतिनिधित्व गर्छ।
त्यहाँ दुई भाषा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। यो स्वाहिली र अंग्रेजी। तर अलग तिनीहरूलाई देखि केन्यामा, त्यहाँ स्थानीय भाषाहरूको एक ठूलो विविधता छ। तिनीहरूलाई बीच, लुओ र luhia, kikamba, किकुयू, आदि
Kenyans - हँसिलो र धेरै सांगीतिक मान्छे, जसको संस्कृति को रीतिथितिहरू एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। पुस्ता देखि पुस्ता गर्न दन्तिये, दन्त्यकथा र गीतहरू को रूप मा यहाँ र कहानी पारित गरिएको छ।
यो दिन पुरातन शिल्प को एक ठूलो संख्या छ कि अफ्रिकी देशमा संरक्षित। यो बुनाई पत्थर र काठ, साथै मा carved छ। सबैभन्दा केन्याको कलाकारहरूको एक पटक आफ्ना पुर्खाहरू resorted जो ती प्रविधी, प्रयोग कला आफ्नो काम सिर्जना।
पर्यटकहरु देखि प्रतिक्रिया, अफ्रिकी मान्छे धेरै, मिलनसार अनुकूल, खुसी राज्य अतिथि मा आगमन भेट्न छन्।
जनवरी, मिश्र मा आकर्षक यात्रा
सूकर - बोलिभिया को राजधानी
नर्वे मा Akershus गढ: विवरण र फोटो
जन्जिबार यात्रा। बाँकी बारेमा समीक्षा, फोटो
आफ्नो निद्रामा Shivers एक नवजात, किन र के गर्न?
एल्यूमीनियम लागि प्राइमर: विस्तृत निर्देशनहरू
उहाँले आए जहाँ जस के पिउन र?
Rada - यसको विशेषताहरु को मूल्य को नाम
कसरी इस्त्री प्रयोग कर्ल सिर्जना गर्न